Igama lesiqhelo: i-salicylic acid yezihloko (NGABA NDIYA KUYA NJENGOBA NDISELE NDISELE)
Igama lebrand: I-Acnevir, iCeraVe SA Ukuhlaziya, iCompound W, iDermalZone, iDermarest Psoriasis Skin Treatment, uGqirha Scholl's Removers, Freezone Corn Remover, Keralyt, Mediplast, Salex, Scalpicin Scalp Relief, Stri-Dex, Wart Remover, Xalix
Udidi lweziyobisi: Iiarhente zamabala amabala , Izihloko zekeratolytics
l theanine dosage 400 mg
NguMedical; Uhlaziywe ngu-Varixcare.cz ngo-Agasti 3, 2021. Ibhalwe nguCerner Multum.
Yintoni iWart Remover?
Ialiclic acid I-keratolytic (i-peeling agent) ebangela ukuphalazwa kocwecwe lwangaphandle lolusu.
Wart Remover (kulusu) isetyenziselwa unyango lwe induna , inkwethu , seborrhea, okanye Psoriasis , kunye nokususa umbona, iifowuni, kunye iintsumpa .
Ukususa intsumpa kusenokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo sonyango.
Isisusi seWart sinokubangela ukusabela okungaqhelekanga kodwa okunobuzaza okanye isikhumba esibi. Yeka ukusebenzisa i-Wart Remover kwaye ufumane uncedo lonyango olungxamisekileyo ukuba: imihlathi ukurhawuzelela; ukuphefumla nzima, ukuziva ukhaphukhaphu; okanye ukudumba kobuso bakho, imilebe, ulwimi, okanye umqala.
Phambi kokuba uthathe eli yeza
Akufanele usebenzise i-Wart Remover ukuba u-aleji kuyo.
Sebenzisa eli yeza emntwaneni okanye kwishumi elivisayo elinempawu zomkhuhlane okanye irhashalala linokubangela imeko enzulu okanye ebulalayo ebizwa ngokuba yiReye's syndrome.
Buza ugqirha okanye usokhemisti ukuba ngaba eli yeza likhuselekile ukuba ulisebenzise ukuba unayo:
isifo sesibindi okanye sezintso;
isifo seswekile; okanye
iingxaki zokuhamba kwegazi.
Buza ugqirha ngaphambi kokusebenzisa eli yeza ukuba ukhulelwe okanye uncelisa.
Ndingayisebenzisa njani iWart Remover?
Isisusi seWart sifumaneka ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo, ezinjengamanzi, ijeli, into yokuthambisa, ukhilimu, ioyile, igwebu, isepha, ishampu, iiphedi zelaphu kunye neepatches.
Sebenzisa ngokuchanekileyo njengoko kuyalelwe kwileyibhile, okanye njengoko kumiselwe ngugqirha wakho.
Musa ukuthatha ngomlomo. Amayeza asemxholweni asetyenziswa kuphela kulusu.
Isisusi seWart sinokubangela ukusabela okungaqhelekanga kodwa okunobuzaza okanye isikhumba esibi. Faka inani elincinci kakhulu lamayeza 'njengedosi yovavanyo' kwindawo enye okanye ezi-2 zolusu yonke imihla iintsuku ezintathu zilandelelana. Ukuba awunampendulo kwiyeza, qalisa ukusebenzisa yonke imali oyibekelweyo ngomhla we-4.
Kuya kufuneka ulishukumise iyeza ngaphambi kokuba ulisebenzise. Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yemveliso.
Sukusebenzisa iWart Remover ukunyanga nayiphi na imeko engakhange ihlolwe ngugqirha wakho.
Iimpawu zakho zisenokungaphucuki iintsuku ezininzi. Tsalela umnxeba ugqirha wakho ukuba iimpawu zakho aziphucuki, okanye ukuba ziya zisiba mbi.
Gcina Isisusi seWart kwisitya sentsusa kubushushu begumbi, kude ukufuma kunye nobushushu.
Gcina i-foam canister kude nedangatye elivulekileyo okanye ubushushu obuphezulu. Ibhokisi yebhokisi inokuqhuma xa kushushu kakhulu. Musa ukugqobhoza okanye ukutshisa i-erosol engenanto.
Gcina ukuya kuthi ga kuma-80% kwimigqaliselo yakho.
Yamkelwe kwiikhemesti ezingaphezu kwama-65,000.
Fumana iKhadi lesaphulelo
Kwenzeka ntoni ukuba ndiphose idosi?
Isisusi seWart sisetyenziswa xa kufuneka njalo. Ukuba ukwishedyuli yedosi, tsiba nayiphi na idosi ephosiweyo. Sukusebenzisa amanani amabini ngexesha elinye.
Kwenzeka ntoni ukuba ndithoba kakhulu?
Funa unyango olukhawulezileyo okanye utsalele umnxeba kwiNcedo loNetyhefu ku-1-800-222-1222 ukuba kukho umntu oliginye ngengozi iyeza.
Yintoni endifanele ndiyiphephe ngelixa ndisebenzisa iWart Remover?
Gwema ukusebenzisa i-Wart Remover kumanxeba avulekileyo okanye xa utshiswe lilanga, ubethwe ngumoya, womile okanye ucaphukisa ulusu.
Hlamba ngamanzi ukuba eli yeza lingena emehlweni okanye emlonyeni wakho.
l theanine kunye ne-5 htp kunye
Eli yeza linokutsha. Sukusebenzisa kufutshane nobushushu obuphezulu okanye ilangatye elivulekileyo. Hlamba iyeza ezandleni zakho ngaphambi kokuba uphathe isixhobo sokwenza iinwele (njengokugoba okanye ukulungisa intsimbi). Ukushisa okuphezulu kunokubangela ukuba iyeza litshise kwaye litshise ulusu lwakho. Musa ukutshaya de ijeli yomile ngokupheleleyo kulusu lwakho.
Gwema ukusebenzisa amanye amayeza kwiindawo oziphatha ngeWart Remover, ngaphandle kokuba ugqirha ukuxelele.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeWart Remover
Isisusi seWart sinokubangela ukusabela okungaqhelekanga kodwa okunobuzaza okanye isikhumba esibi. Ezi mpendulo zinokwenzeka kwimizuzu nje embalwa emva kokufaka iyeza, okanye emva kosuku okanye ngaphezulu emva koko.
Yeka ukusebenzisa eli yeza kwaye ufumane uncedo lonyango olungxamisekileyo ukuba unayo iimpawu negazi lakho : urticaria, ukurhawuzelela; ukuphefumla nzima, ukuziva ukhaphukhaphu; ukudumba kobuso bakho, imilebe, ulwimi, okanye umqala.
Yeka ukusebenzisa iWart Remover kwaye ubize ugqirha wakho kwangoko ukuba unayo:
kakhulu intloko ebuhlungu , ukukhala ezindlebeni zakho, iingxaki zokuva, iingxaki zokucinga;
iintlungu esiswini, ukugabha , okanye urhudo ;
Ngaba i-tylenol inokubangela urhudo
imvakalelo ekhanyayo, ngathi ungaphumelela;
ukuqhawukelwa ngumphefumlo; okanye
ukutshisa okukhulu, ukoma, okanye ukucaphuka kolusu.
Iziphumo eziqhelekileyo zinokubandakanya:
ukucaphuka kolusu oluncinci ukukhawuleza, okanye ukuxobuka; okanye
utshintsho kumbala wesikhumba esinyangiweyo (uhlala umhlophe).
Olu ayilo luhlu olupheleleyo lweziphumo ebezingalindelekanga kwaye ezinye zinokwenzeka. Shayela ugqirha wakho malunga neengcebiso. Unokuxela iziphumo ebezingalindelekanga kwi-FDA ngo-1-800-FDA-1088.
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela ukususwa kweWart?
Iyeza elisetyenzisiweyo kulusu akunakuchaphazeleka ngamanye amayeza owasebenzisayo, kodwa amachiza amaninzi anokusebenzisana. Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza akhoyo ngoku, kubandakanya amayeza kunye amayeza angaphezulu kwekhawuntareni, iivithamini , kunye iimveliso zemifuno .
Khumbula, gcina oku kunye nawo onke amanye amayeza apho abantwana bangenakufikelela khona, ungaze wabelane nabanye ngamayeza akho, kwaye usebenzise la mayeza kuphela kulwazi olumiselweyo.
I-allegra 180 mg kabini imihla ngemihla
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 5.02.
Ukukhupha iHormone TRH
Ungayikhetha njani eyona vacuum yeenwele zasekhaya
3513 10 mg SB 10 mg (iDexedrine Spansule 10 mg)
I-Laryngoscopy engathanga ngqo
Cholesterol kunye nempilo yakho
Uyenza njani iMibuzo yokusetha kwakhona iphasiwedi ngaphakathi Windows 10
Uyenza njani i-Microsoft Word 2019 iThulbha yoFikelelo oluKhawulezayo
ICitracal + D
Indlela yokusetha isikhumbuzi somsebenzi kwi-Outlook
Ukongeza iiYure, iMizuzu, okanye iMizuzwana kwiXesha kwi-Excel
Uluhlu lwemithambo eshukumayo
ukungenisa njani umculo kwi-iTunes
uyongeza njani i-hard drive
ukutya okuphezulu kwii-salicylates
ukuqala njani imbewu yentsangu